Shinobi: Heart Under Blade (2005) | MM Movie Store
နငျဂြာတှထေဲမှာ အစှမျးထကျဆုံး အုပျစု ၂ စု ရှိပွီး ထိုအုပျစု ၂ ခုလုံးဟာ လုံးဝ မတညျ့ကွပါဘူးတောငျ တဈဖကျ တဈခွမျး စီမှာ နထေိုငျကွပွီး အမွဲတမျး သကျဖွတျနခေဲ့တာ ရနျငွိုးတှကေ နှဈပေါငျး ၄၀၀ တိုငျခဲ့ပါတယျ…
ထို အုပျစု နှဈခုပေါငျးစညျးပွီး တျောလှနျလာမှာကို ကွောကျလနျ့လာတဲ့ အစိုးရကတော့ ထိုအခှငျ့အရေးကို လကျလှတျမခံပဲအုပျစု ၂ စုကို အသအေကွေ တိုကျခိုကျစပွေီး အနိုငျရရှိသူကို အခှငျ့အလမျး ပေးဖို့ကွညောပေးလိုကပါတယျ..
ထို ရနျငွိုးတှကွေားမှာတော့ နှဈဖကျ အုပျစု နှဈခုက လူကွီးတှေ ရဲ့ သားနှငျ့သမီး ကတော့ ခဈြကွိုကျနကွေပါတယျ…ထို တိုကျခိုကျရမညျ့ အမိနျ့ကွညောစာတမျး ရောကျရှိလာခြိနျမှာတော့ သူတို့ ခဈြသူ နှဈဦးဟာ စဈမွပွေငျမှာ ရနျသူတှအေဖွဈပွနျလညျရငျဆိုငျရတော့မှာပါ…
နှဈဖကျလုံး အသအေကွတေိုကျခိုကျပွီး ဘယျသူတှေ နိုငျကွမှာလဲ ခဈြသူနှဈဦးကရော လကျတှဲခှငျ့ရနိုငျမှာလား…ဆိုတာ ဆကျလကျကွညျ့ရှုလိုကျကွပါ….
နင်ဂျာတွေထဲမှာ အစွမ်းထက်ဆုံး အုပ်စု ၂ စု ရှိပြီး ထိုအုပ်စု ၂ ခုလုံးဟာ လုံးဝ မတည့်ကြပါဘူးတောင် တစ်ဖက် တစ်ခြမ်း စီမှာ နေထိုင်ကြပြီး အမြဲတမ်း သက်ဖြတ်နေခဲ့တာ ရန်ငြိုးတွေက နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ တိုင်ခဲ့ပါတယ်…
ထို အုပ်စု နှစ်ခုပေါင်းစည်းပြီး တော်လှန်လာမှာကို ကြောက်လန့်လာတဲ့ အစိုးရကတော့ ထိုအခွင့်အရေးကို လက်လွှတ်မခံပဲအုပ်စု ၂ စုကို အသေအကြေ တိုက်ခိုက်စေပြီး အနိုင်ရရှိသူကို အခွင့်အလမ်း ပေးဖို့ကြေညာပေးလိုကပါတယ်..
ထို ရန်ငြိုးတွေကြားမှာတော့ နှစ်ဖက် အုပ်စု နှစ်ခုက လူကြီးတွေ ရဲ့ သားနှင့်သမီး ကတော့ ချစ်ကြိုက်နေကြပါတယ်…ထို တိုက်ခိုက်ရမည့် အမိန့်ကြေညာစာတမ်း ရောက်ရှိလာချိန်မှာတော့ သူတို့ ချစ်သူ နှစ်ဦးဟာ စစ်မြေပြင်မှာ ရန်သူတွေအဖြစ်ပြန်လည်ရင်ဆိုင်ရတော့မှာပါ…
နှစ်ဖက်လုံး အသေအကြေတိုက်ခိုက်ပြီး ဘယ်သူတွေ နိုင်ကြမှာလဲ ချစ်သူနှစ်ဦးကရော လက်တွဲခွင့်ရနိုင်မှာလား…ဆိုတာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါ….
2 thoughts on “Shinobi: Heart Under Blade (2005)”